पुडासैनी प्र’करणमा मु’छिएकी अस्मिता कार्कीले गरिन सनस’नीपूर्ण खुलासा - भिडियाे - Articles Nepal
पुडासैनी प्र’करणमा मु’छिएकी अस्मिता कार्कीले गरिन सनस’नीपूर्ण खुलासा – भिडियाे
Articles Nepal August 17, 2019 0
काठमाडाैं : पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्मह’त्या प्रक’रणमा मुछिएकी युवती अस्मिता कार्कीले आफ्ना पर्सनल एसएमएस धमाधम सार्वजनिक भएकोप्रति आ’पत्ति प्रकट गर्दै एसएमएस सार्वजनिक गर्नेविरुद्ध साइबर क्रा’इममा मु’द्धा दायर गर्ने जनाएकी छिन् । अस्मिताले आफ्ना पर्सनल एसएमएस सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका प्रोड्युसर दीपक बोहरा र एक युवती ज्वाला संग्रौलाले गोप्य हुनुपर्ने एसएमएसहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेको खुलासा गरेकी छिन । साथै उनी आ’क्रोशित पनि भएकी छिन ।
घटना भएपछि सम्बन्धित निकायलाई ती एसएमएस दिँदा ठीक होला तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेर कसैलाई दो’षारोपण गर्नु कत्तिको ठीक हो भनेर उनले प्रश्न गरेकी छन्। शालिकरामले पहिले पहिले पठाएका एसएमएसलाई सार्वजनिक गरी आफ्नो चरित्रह’त्या गर्न खोजेको भन्दै उनले यसबारे कानूनी उपचार खोज्ने जनाएकी हुन् । आफ्ना गाे’प्य एसएमएसहरु अरुबाट सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिनुले आफ्नाे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् भएकाे उनकाे गुना’साे छ।
एक सञ्चारमाध्यमसँगकाे कुराकानीका क्रममा उनले भनेकी छन्, ‘मैँले शालिकरामले पठाएका एसएमएस कृष्ण थापा र अनिल ढुंगेललाई गो’प्यता कायम राख्ने शर्तमा शालिकरामलाई सम्झाईदिन आग्रह गर्दै दिएकोमा सामाजिक सञ्जालमार्फत दीपक बोहोरा र ज्वाला संग्रौलाले किन सार्वजनिक गरे ? मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हन’न् भयो ।’
यसैबीच अधिवक्ताहरुले अर्काको एसएमएस विना अनुमति सार्वजनिक गर्नु अप’राध हुने बताएका छन् । संविधानको धारा २८ मा गाेप’नियतासम्बन्धीको हक उल्लेख छ । जसमा व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, पत्राचार, लिखत र तथ्याङकसम्बधी डकुमेन्टहरु सार्वजनिक गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृ’त्यु प्रक’रणमा प’क्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोला रवी लामिछानेसहित ३ जनालाई चितवन जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको छ । बिहीबार काठमाडौंस्थित न्यूज २४ टेलिभिजनको कार्यालयबाट प’क्राउ परेका लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता भनिने रुकु कार्कीलाई चितवन जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको हो ।
चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार अहिले लामिछानेसहित ३ जनालाई न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमको इजलाशमा उपस्थित गराइएको छ । साउन २२ गते दिउँसो ३ः ३० बजे होटलको २०२ नम्बर कोठामा गएका उनलाई होटलवालाले राति खान खान बोलाउँदा चुकुल नखोलेपछि प्रहरी बोलाएर ढोका खोल्दा उनी मृत भेटिएका थिए । रवि लामिछानेलाई प’क्राउ गर्नुअघि प्रहरीले पुडासैनीको भिडियो प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मगाएर परीक्षण गरेको थियो ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले मर्नुअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा तीन वटै जनाको नाम लिएका थिए । के छ भिडियोमा ? न्युज २४ टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार युवराज कँडेलले सँगै काम गरौँ भन्दा सुरुमा आफूले नमानेको पुडासैनीले भिडियोमा उल्लेख गरेका छन्। ‘काठमाडौंमा सेक्युरिटी कम्पनी चलाएर बसेका बेलामा युवराजसँग केही वर्ष अघि भेट भयो। उसले मलाई तान्न कोसिस गर्यो’, पुडासैनीले भिडियोमा भनेका छन्, ‘मैले गर्दिनँ भनेँ। धेरै कोसिस गरेपछि पार्ट टाइम गरेँ। महिनाको १५ हजार दिन थाले।’
पछि फुल टाइम गर्न द’बाब दिन थालेपछि उनीहरूले भनेबमोजिम सबै अफिस छोडेर काम गर्न थालेको उनले उल्लेख गरेका छन्। सेक्युरिटी कम्पनी र कन्सल्ट्यान्सी चलाउँदा महिनामा एक डेढ लाख कमाएको उल्लेख गर्दै टिभीमा काम गर्न थालेपछि बैंकमा रहेको ऋण तिर्न नसकेर आफू डिप्रेसनमा पुगेको पनि उल्लेख गरेका छन्। न्युज २४ टेलिभिजनमा जोसँग रिस उठ्यो उसैविरुद्ध समाचार बनाउने गरेको पनि उनले भिडियोमा दाबी गरेका छन्। आफूले धेरैपटक तलब बढाउन आग्रह गर्दा पनि अन्तिममा १९ हजार ५०० मात्र पुर्याइएको र छोड्छु भन्दा ‘छोडिस् भने सि’ध्याउँछु भनेर युवराजले ध’म्की दिने गरेको’ उनले दाबी गरेका छन्।
न्युज २४ का युवराज र दीपकले ‘काम नछोड्’ भन्दै अस्ट्रेलिया जाने केटी मिलाइदिन्छु भनेर अस्मिता कार्की नामकी युवतीलाई फेसबुकमा सम्पर्क गराइदिएको उल्लेख गरेका छन्। ‘सबै कुरा हुन थाल्यो, नजिकिन थाल्यौँ’, उनले भिडियोमा भनेका छन्। तर, पछिल्लो समय ती युवतीले हेप्न थालेपछि आफूले न्युज २४ छोडेर माउन्टेन टेलिभिजन ज्वाइन गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि युवराजले आफूलाई ‘फँ’सिस्’ भनेको पनि उनले दाबी गरेका छन्। भिडियोमा पुडासैनीले दाबी गरेका छन्- ‘युवराज र रवि दाइ मिलेर फ’साउने प्लान बनाएका रहेछन्। त्यसैले मैले यो डिसिजन लिएँ।’ आफूले जोडेको करोडौँको सम्पत्तिको संर’क्षण गर्न उनले श्रीमतीलाई भनेका छन्। श्रीमती र बाबु आमासँग उनले रुँदै माफी मागेको भिडियोमा देखिन्छ।
‘रवि लामिछाने तिमीलाई एक दिन पा’प लाग्नेछ। तिमीजस्तो अध’र्मी यो देशमा कोही छैन। दुनियाँलाई थर्काएका छौ, लु’टेका छौ। तिमीलाई पोल्नेछ त्यो पैसाले’, उनले आफ्ना पूर्व सहकर्मीलाई भनेका छन्, ‘मलाई १८ हजार दिएर करोडौँ कमाउँथ्यौ। अरुको प्रगति देख्न सक्दैनौँ। रविको असली रूप देखिन केही वर्ष लाग्नेछ।’
प्रस्तोता लामिछानेले बालुवा तस्कर, व्यापारी र उद्योगसँग करोडौँ असुलेको आ’रोप लगाउँदै उनले भिडियोमा दाबी गरेका छन्- ‘अस्मिता कार्की, रवि र युवराज कँडेल मेरो ह’त्यारा हौ।’ भिडियोमा नाम लिएका ‘दीपक दाइको…दो’ष नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। प’क्राउ परेका रवी, युवराज र अस्मितामाथि अब प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउने छ । प’क्राउ परेका रवी माथिको अ’भियोग पुष्टी भए यस्तो सजाय हुने छ ।
काठमाडाैं : पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्मह’त्या प्रकरणमा मु’छिएकी युवती अस्मिता कार्कीले आफ्ना पर्सनल एसएमएस ध’माधम सार्वजनिक भएकोप्रति आ’पत्ति प्रकट गर्दै एसएमएस सार्वजनिक गर्नेविरुद्ध साइबर क्रा’इममा मु’द्धा दा’यर गर्ने जनाएकी छिन् । अस्मिताले आफ्ना पर्सनल एसएमएस सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका प्रोड्युसर दीपक बोहरा र एक युवती ज्वाला संग्रौलाले गो’प्य हुनुपर्ने एसएमएसहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेको खुलासा गरेकी छित । साथै उनी आक्रो’शित पनि भएकी छिन ।
घटना भएपछि सम्बन्धित निकायलाई ती एसएमएस दिँदा ठीक होला तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेर कसैलाई दो’षारोपण गर्नु कत्तिको ठीक हो भनेर उनले प्रश्न गरेकी छन्। शालिकरामले पहिले पहिले पठाएका एसएमएसलाई सार्वजनिक गरी आफ्नो चरित्रह’त्या गर्न खोजेको भन्दै उनले यसबारे कानूनी उपचार खोज्ने जनाएकी हुन् । आफ्ना गाे’प्य एसएमएसहरु अरुबाट सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिनुले आफ्नाे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् भएकाे उनकाे गुनासाे छ।
एक सञ्चारमाध्यमसँगकाे कुराकानीका क्रममा उनले भनेकी छन्, ‘मैँले शालिकरामले पठाएका एसएमएस कृष्ण थापा र अनिल ढुंगेललाई गो’प्यता कायम राख्ने शर्तमा शालिकरामलाई सम्झाईदिन आग्रह गर्दै दिएकोमा सामाजिक सञ्जालमार्फत दीपक बोहोरा र ज्वाला संग्रौलाले किन सार्वजनिक गरे ? मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हनन् भयो ।’
यसैबीच अधिवक्ताहरुले अर्काको एसएमएस विना अनुमति सार्वजनिक गर्नु अप’राध हुने बताएका छन् । संविधानको धारा २८ मा गाे’पनियतासम्बन्धीको हक उल्लेख छ । जसमा व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, पत्राचार, लिखत र तथ्याङकसम्बधी डकुमेन्टहरु सार्वजनिक गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृ’त्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोला रवी लामिछानेसहित ३ जनालाई चितवन जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको छ । बिहीबार काठमाडौंस्थित न्यूज २४ टेलिभिजनको कार्यालयबाट प’क्राउ परेका लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता भनिने रुकु कार्कीलाई चितवन जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको हो ।
चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार अहिले लामिछानेसहित ३ जनालाई न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमको इजलाशमा उपस्थित गराइएको छ । साउन २२ गते दिउँसो ३ः ३० बजे होटलको २०२ नम्बर कोठामा गएका उनलाई होटलवालाले राति खान खान बोलाउँदा चुकुल नखोलेपछि प्रहरी बोलाएर ढोका खोल्दा उनी मृ’त भेटिएका थिए । रवि लामिछानेलाई प’क्राउ गर्नुअघि प्रहरीले पुडासैनीको भिडियो प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मगाएर परीक्षण गरेको थियो ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले म’र्नुअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा तीन वटै जनाको नाम लिएका थिए । के छ भिडियोमा ? न्युज २४ टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार युवराज कँडेलले सँगै काम गरौँ भन्दा सुरुमा आफूले नमानेको पुडासैनीले भिडियोमा उल्लेख गरेका छन्। ‘काठमाडौंमा सेक्युरिटी कम्पनी चलाएर बसेका बेलामा युवराजसँग केही वर्ष अघि भेट भयो। उसले मलाई तान्न कोसिस गर्यो’, पुडासैनीले भिडियोमा भनेका छन्, ‘मैले गर्दिनँ भनेँ। धेरै कोसिस गरेपछि पार्ट टाइम गरेँ। महिनाको १५ हजार दिन थाले।’
पछि फुल टाइम गर्न दबा’ब दिन थालेपछि उनीहरूले भनेबमोजिम सबै अफिस छोडेर काम गर्न थालेको उनले उल्लेख गरेका छन्। सेक्युरिटी कम्पनी र कन्सल्ट्यान्सी चलाउँदा महिनामा एक डेढ लाख कमाएको उल्लेख गर्दै टिभीमा काम गर्न थालेपछि बैंकमा रहेको ऋण तिर्न नसकेर आफू डिप्रेसनमा पुगेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
न्युज २४ टेलिभिजनमा जोसँग रिस उठ्यो उसैविरुद्ध समाचार बनाउने गरेको पनि उनले भिडियोमा दाबी गरेका छन्। आफूले धेरैपटक तलब बढाउन आग्रह गर्दा पनि अन्तिममा १९ हजार ५०० मात्र पुर्याइएको र छोड्छु भन्दा ‘छोडिस् भने सिध्याउँछु भनेर युवराजले ध’म्की दिने गरेको’ उनले दाबी गरेका छन्।
न्युज २४ का युवराज र दीपकले ‘काम नछोड्’ भन्दै अस्ट्रेलिया जाने केटी मिलाइदिन्छु भनेर अस्मिता कार्की नामकी युवतीलाई फेसबुकमा सम्पर्क गराइदिएको उल्लेख गरेका छन्। ‘सबै कुरा हुन थाल्यो, नजिकिन थाल्यौँ’, उनले भिडियोमा भनेका छन्। तर, पछिल्लो समय ती युवतीले हेप्न थालेपछि आफूले न्युज २४ छोडेर माउन्टेन टेलिभिजन ज्वाइन गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि युवराजले आफूलाई ‘फँ’सिस्’ भनेको पनि उनले दाबी गरेका छन्। भिडियोमा पुडासैनीले दाबी गरेका छन्- ‘युवराज र रवि दाइ मिलेर फ’साउने प्लान बनाएका रहेछन्। त्यसैले मैले यो डिसिजन लिएँ।’ आफूले जोडेको करोडौँको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न उनले श्रीमतीलाई भनेका छन्। श्रीमती र बाबु आमासँग उनले रुँदै माफी मागेको भिडियोमा देखिन्छ।
‘रवि लामिछाने तिमीलाई एक दिन पा’प लाग्नेछ। तिमीजस्तो अध’र्मी यो देशमा कोही छैन। दुनियाँलाई थ’र्काएका छौ, लु’टेका छौ। तिमीलाई पो’ल्नेछ त्यो पैसाले’, उनले आफ्ना पूर्व सहकर्मीलाई भनेका छन्, ‘मलाई १८ हजार दिएर करोडौँ कमाउँथ्यौ। अरुको प्रगति देख्न सक्दैनौँ। रविको असली रूप देखिन केही वर्ष लाग्नेछ।’
प्रस्तोता लामिछानेले बालुवा त’स्कर, व्यापारी र उ’द्योगसँग करोडौँ अ’सुलेको आ’रोप लगाउँदै उनले भिडियोमा दाबी गरेका छन्- ‘अस्मिता कार्की, रवि र युवराज कँडेल मेरो ह’त्यारा हौ।’ भिडियोमा नाम लिएका ‘दीपक दाइको…दो’ष नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। प’क्राउ परेका रवी, युवराज र अस्मितामाथि अब प्रहरीले अनु’सन्धान अघि बढाउने छ । प’क्राउ परेका रवी माथिको अ’भियोग पु’ष्टी भए यस्तो सजाय हुने छ ।
Previous Post: रवि लामिछाने पक्राउ, अब के हुन्छ?
Next Post: “हाम्रो रवि हाम्रो देश, प्राण भन्दा प्यारो छ” भन्दै काठमाण्डौमा प्रदर्शन – भिडियो